I-Snapdragon 855: Iprosesa yokuqala ye-7nm yeQualcomm ene5G | I-Androidsis
Ukuphela kukaNovemba iindaba zaphuma, kulindeleke ukuba I-Qualcomm iya kubonisa iprosesa yayo entsha yokuphela okuphela ngokusemthethweni ngoDisemba 4. Ekugqibeleni yafika imini kwaye ibikhona. Emva kokuvuza okuninzi imini yonke izolo, ebusuku Yaziswa ngokusemthethweni i-Snapdragon 855. Yiprosesa entsha yokuphela kwephawu, eya kuthi ilawule eli candelo lentengiso kwi-Android kwi-2019.
I-Snapdragon 855 ime ngokuzisa uphuculo olwahlukileyo olubalulekileyo kunangaphambili. IQualcomm isishiya neprosesa enamandla, enobukho obukhulu bobukrelekrele bokwenza kunye ukufunda ngomatshini kwaye ifuna ukugqwesa abo sikhuphisana nabo ngayo yonke indlela. Uyayifumana?
Ukuthobela ngokupheleleyo, kuba le chip intsha isuka kwiQualcomm sele ishiye amagqabantshintshi amahle kwaye ibonakala igqithile Exynos 9820 y Kirin 980 xa kufikwa ekusebenzeni. Ke isiphelo se-Android sonyaka ozayo siza kuba neprosesa enamandla kunye namathuba amaninzi.
I-Snapdragon 855: Yenziwe kwi-7nm kunye nokuphuculwa kwe-AI
Njengoko yayisele ivuza izihlandlo ezidlulileyo, kwaye ekugqibeleni ibonakalisiwe kwintetho yakhe, I-Snapdragon 855 yiprosesa yokuqala eyenziwa yiQualcomm kwi-7 nm. Sijongene neprosesa egxile kulawulo lomsebenzi wobukrelekrele bokufakelwa. Ngale ndlela, amandla athenjisiwe kathathu, enkosi kuqaliso lweekhompyuter zokulungelelanisa iifoto. Njengoko bekulindelwe, ineyunithi ye-NPU yokulawula le misebenzi yobukrelekrele bokuzenzela.
Le yenye yeendlela zentengiso, ngazo bafuna ukufumana eyona khamera intle, ngokubaluleka okukhulu kwesoftware kunezixhobo zekhompyutha. Oku kuthetha ukuba ii-algorithms ziyaziswa apho unokufumana iindlela ezongezelelweyo zokufota. Umzekelo, imo ye-portrait kwii-Pixels inolu hlobo lwe-algorithm, evumela ukuba izoyilo ezintsonkothileyo zisonjululwe.
Kwicala lemizobo, i-Snapdragon 855 nayo ime ngaphandle, ngokungothusiyo. IQualcomm Iimpawu kwi-GPU oko bakubiza ngokuba yi-Elite Gaming, egxile kwimidlalo. Ukwenza oku, uphuculo olubonakala ngathi lukhumbuza iGPU Turbo yaziswa kwiifowuni zeHuawei. Nangona uphawu okwangoku lunganikanga zinkcukacha malunga nezi mpawu. Kule meko, iprosesa lisebenzisa i-Adreno 640 GPU, efanelekileyo yokudlala.
Enye into apho le processor icace gca kukwaziswa kwe- Inkxaso yomfundi weminwe ye-ultrasonic phantsi kwesikrini. Inqaku esifumana ngakumbi nangakumbi kwiimodeli kuluhlu oluphezulu. Ngale ndlela, baya kuba nale nkxaso kwi-2019, unyaka ekulindeleke ukuba silibone eli nqaku linamaxesha amaninzi kwiifowuni eziphezulu kwi-Android. Ndiyabulela kule nkxaso, kunokwenzeka ukuba siza kulibona eli nqaku rhoqo.
Kukwakho neendaba ezibalulekileyo kunxibelelwano. Kungenxa yokuba uSnapdragon 855 ungowokuqala ukuba nemodem yeX50, enkosi ixhasa / izakuvumela uqhagamshelo lwe5G kubasebenzisi. Ngale ndlela, iprosesa iba yeyokuqala kwimarike yokubonelela ngenkxaso ye5G. Ukuthathela ingqalelo ukuba iifowuni ngenkxaso ye-5G kulindeleke ukuba zifike kwisiqingatha sokuqala sonyaka ozayo, ngekhe kumangalise ukuba uninzi lwazo luzakusebenzisa le processor.
Malunga nokusetyenziswa kwebhetri akukho nto ikhankanyiweyo kwintetho. Nangona iiprosesa ezintsha zenziwe nge-7 nm ngokubanzi zifika kusetyenziswa ibhetri esezantsi. Ke iya kuvumela abasebenzisi ngemodeli ephezulu ye-Android ukuba babe nokusebenzisa ngokukuko. Ngaphandle kwamathandabuzo, ithuba lokuthatha ingqalelo.
Imveliso ye-Snapdragon 855 kulindeleke ukuba iqale kungekudala. Okunokwenzeka kwi-MWC 2019 sidibana neefowuni zokuqala yentengiso ezisebenzisa le processor yeQualcomm entsha. Ucinga ntoni malunga neprosesa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 855 ngoku isemthethweni: Iprosesa entsha yokuphela okuphezulu
Wazi njani ukuba lixesha lokutshintsha iifowuni ze-Android